नेपाल कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको भनाइ
काठमाडौं । सरकारले घरभित्रै बसिदिएर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सघाउन सबैलाई पुनः आग्रह गरेको छ ।
१४ दिन क्वारेन्टिनमा बसिसकेकाहरुलाई पनि अझै केही दिन क्वारेन्टिनमा बसिदिन सरकारले आग्रह गरेको छ ।
उनीहरुलाई आ–आफ्ना जिल्लाको क्वारेन्टिनमा बसेको बेला नमूना लिएर परीक्षण गर्दा तीनैजनामा संक्रमण पोजेटिभ पाइएको हो । उनीहरु सबैको अहिले सेती अञ्चल अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ ।
१४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई पनि पुनः परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाइएकाले क्वारेन्टिनको अवधि बढ्न सक्ने उनले बताए ।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमा डा. देवकोटाले भने, ‘अहिले १४ दिन क्रस गर्दाखेरि पनि पुनः परीक्षण गर्दा केहीलाई पोजेटिभ देखिएको छ । त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि क्वारेन्टिनको अवधि बढ्ने देखिन्छ । यहाँहरु क्वारेन्टिनमै बसिदिनुहोला ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्ने अवधि बढ्न सक्ने बताएका छन् ।